Home Wararka Xagee ayuu Dalkaan u Wadaa Farmajo oo Muddo Xileedkiisii Dhammaaday?. Khater Iyo...
Xagee ayuu Dalkaan u Wadaa Farmajo oo Muddo Xileedkiisii Dhammaaday?. Khater Iyo Halaag.
Runtii waa su’aal uu qof waliba is weydiinayo una baahan in jawaab loo helo. Qofkasta oo Somali ah mucaarid iyo Muxaafid wadnaha ayuu farta ku hayaa waxaana laga siman in dalka uu khater aan laga soo celin Karin ku socdo.
Farmajo iyo Fahad waxay dalkaan ku wadaan waddo halis ah, waxaana ka daran in mucaaridka aysan weli ku baraarugsaneyn halista soo socota, iyadoo aan hal mar bilaaban laakiin malinba maalinta ka dambeysaa ay horteenna ka dhaceysay.
Waxaa akhristayaasheenna isku dayeynaa inaan xusuussinno qaar ka mid ah dhacdooyinka halkaan na keenay kuwaas oo ahayd in markey bilowga ahaayeen laga hortago.
hayey wixii dhacay ee gabood fallo iyo ku tumashao sharci ee uu isagu sameeyey ama uu qeyb ka ahaa:
14 Agoosto 2017 waxaa kooxda Farmajo ay fuliyeen in MW Cali Cabdullahi Cosoble xilka laga tuuro, iyadoo 24/10/2017 lagu badalay si musuqmaasuq baahsan ah oo dorasho hal wareeg ah lagu soo saaray Maxamed Cabdi waare
25 Agoosto 2017 Waxaa dad shacbi ah la Xasuuqay Bariirre, kuwaas oo dowladda Farmajo ay ku sheegtay inay ahaayeen Shabaab.
28Agoosto 2017 waxay Fahad iyo Farmajo dalka Itoobiya gacanta u geliyeen halgamaa Somaliyeed Qalbidhagax oo ahayd taariikhda markii ugu horreysay ee dowlad Somaliyeed ay muwadinkeeda u dhiibto cadow.
17 Disember 2017 Waxaa uu Farmajo amray weerar dil ah oo lagu qaaday Cabdiraxman CabdiShakuur oo Gurigiisa laguna dialy askar ka tirsaneyd ciidanka xooga dalka Somaliyeed kuwaas oo kabahoodii lagu duugay
08 Abriil 2018 Waxay dowladda Farmajo iyo Fahad xoog, cagajugleyn, iyo laaaluush kula wareegeen golaha shacbiga, waxayna eryeen mid ka mid ah ragga ugu aqoonta badan dhinaca shuruucda iyo distuurka gudoomiye Maxamed Sh Cusman Jawaarey. Halkaas oo ku kireysteen Golihii shacbiga una dhiibteen mid aan hadda iyaga dembi yareyn, lagu qaadi doono waqtigiisa Maxamed Mursal..
8 November 2018 waxaa uu Farmajo amray in la eryo MW k/Galbeed Shariif xasan Sh Adan oo uu Farmajo u qabay ciil ka soo bilowday Kampala Accord.
14 Disember 2018 Waxay Fahad, iyo Farmajo ku Xasuuqeen magaalada Baydhabo shacbi 15 qof ah iyadoo xataa Wakiilkii QM ee ka damqaday dalka laga eryey.
08 Juun 2019 Farmajo iyo Fahad waxay lacag malaayiin ah u dhiibeen in Puntland doorashadeeda la carqaladeeyo, lana soo saaro shakhsi la yiraahdo jebiye si looga dhigo Puntland sida hadda ay yihiin H/Shabeelle, K/Galbeed iyo Galmudug.
28 Agoosto 2019 Waxaay Farmajo, iyo Fahad ku qadeen dagaal dhinac kasta ah Shacbiga Jubaland oo ay doorashooyin ka socdeen si loo tuuro Axmed Madoobe oo xataa ciidan Itoobiyaan ah loo adeegsaday.
22 Setember 2019 markiil agu guleysan waayey in la rido Axmed madoobe waxaa xayiraad cirka ah lagu soo rogay dhammaan duulimaadyadii rakaabka iyo daawooyinka u keni jiray dadka Jubaland taas oo ah runtii dambi qaran oo ay ahayd in lagu qaado cidii ka mas’uulka ahayd. Sidoo kale waxaa loo diiday inay Kismayo u safraan Madaxweynayaashii hore ee dalka, taas Iyana ahayd dembi kale.
10 Nofember2019 Fahad iyo Farmajo Waxay u diideen inay ka duulaan garoonka Aden Cadde labadii Madaxweyne Sharif Sh Axmed iyo Xasan sheekh si ay mucaawino u gaarsiiyeen magaalada Balatweyne oo uu ku fahay wabiga shabeelle dadna ku dilay sida hadda laga soo sheegay degaanada H/Shabeelle.
02 Febraayo 2020 Waxay Farmajo iyo Fahad si musuqmaasuq ah u uga dhigeen madaxdweyne Axmed Cabdi Qoorqoor, iyagoo ku bixiyey lacag aad u badan.
25 Julay 2020 RW Dalka oo xataa takanooyin badan la soo galay ayey Farmajo, Fahad iyo Maqaarsaarka Mursal lagu riday 7 daqiiqo, iyadoo aan la marsiinin wax sharci ah, oo uu xataa Agendaha ku jirin balse lagu fuliyey Email ay Farmajo iyo Fahad ay u soo direen Mursal.
27 Satember 2020 waxaa Xasan Cali Kheyre loo diiday inuu wareejiyo xilkii uu sida sharafta leh kula wareegay, tan oo ahyd ihaano iyo ceebeyn rasmi.
19 Febrayo wuxuu Farmajo amray in la khaarijiyo MW hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Skeekh Axmed.
19 Febraayo waxaa uu Farmajo amray in rasaas oodda looga qaado banaanbax nabadeed oo ay hogaaminayeen R/Wasaarihiisii sadex sano iyo Bar Xasan Cali Kheyre iyo Murashaxiin socod ku marayey wadada Airporka.
25 April 2021 markii labaad uu amaray Farmajo in la dilo MW hore Xasan sheekh Maxamuud oo gurigiisa lagu weeraray, waanu ka badbaaday.
25 April 2021 waxaa uu Farmajo amray in weerar lagu qaado goobo badan oo Xamar ka tirsan sida Sanca, KM4, Mirinaayo iyo Shirkole, hasa yeeshee waxaa looga xoog roonaaday ciiidankii marin hababiyey.
Intaan waa dembiyada qaran ee ay galeen Farmajo, Fahad iyo Maxamed Mursal, waxaana jira dembiyo siyaasadeed oo ay si joogto ah ay u waddo madaxtooyada kuwaas oo ay ugu dambeysay maanta qaskii diplomasiyadda ee dalka Kenya iyo Somaliya laga dhex abuuray iyadoo ay dowladda Qatar ka tahay gar wadeen falalka Naxdinta leh ee uu sameynayo Farmajo oo Madaxtooyada Xoog ku jooga, una muuqda inuusan ka baxayn in uu ku dhinto ama xoog looga saaro maahee. Waa yaabe xagee ayuu dalkaan ku wadaa Farmajo?